Waa Maxay Maansada Soomaaliyeed, Ma Gabay Mise Waa Geeraar? ||Tukesomalism.com - Diblomaasi
Waa qoraa ka tirsan Somalism. Wuxuu wax ka qoraa arrimaha bulshada, caafimaadka, cudurada guud, siyaasadda, dhaqaalaha taariikhda, dhacdooyinka dunidda iyo guud ahaan horumarka dadka iyo dalka. Waa qoraa cilmi gaar ah u leh caafimaadka ilkaha. Wuxuu shahaadada jaamacada ee loo yaqaano Bachelor Degree ka haystaa dhaqtarnimada Ilkaha.